Kusukela abasubathi elite musa njalo ukwenza abaqeqeshi engcono. Futhi violin engcono emculweni kungase kungabi super umqhubi. Hhayi kubalondolozi ngamunye uthisha ezithakazelisayo ungathola ikhanda uthisha omkhulu. Ngakho kubalulekile ukuhlukanisa kahle ikhono lokwenza kanye nekhono ngokuphumelelayo izenzo ezinhle zabanye. Nokho, abaholi smart etholakala nabadlali ezinhle, kodwa hhayi bonke abadlali kungaba abaphathi ephezulu ezingeni. Ngingakwazi kanjani ukubona isisebenzi ezithembisa?
Ubuholi - ikhono namakhono ukuhlela ikhambi izinkinga ngokusebenzisa iqembu. Kukhona ezinye izici zobuntu, okuyinto benamakhono nochwepheshe singabeka ngokuhamba ukuhlaziywa, futhi kukhona sobala.
Kuwufanele benaka zobuholi ukuthi abantu owawubanjwe ngasekuqaleni. Mhlawumbe kungukuthi ezihlobene imisebenzi zamanje. Ngokwesibonelo, kubhekwe ikhandidethi ibinguShamuti ithimba football egcekeni noma usihlalo wekomiti izakhamizi. Umuntu onjalo kufanele sibheke bese uzama ukusebenzisa lezi izakhiwo nemvelo senzo.
Ubuholi futhi uphinyiswa ngokuthi "ukudala ikusasa" ikhono lomuntu oyedwa kuya komunye. Yebo, I mean "umlilo emehlweni akhe" esifanayo naleso bathanda ukukhuluma abanye abaqashi. Ingabe lokhu izinga labantu kwenza ikusasa okhangayo, elikhanyayo, ezithakazelisayo. Ngakho ukuthi abangaphansi kwakhe abangu imilutha kakhulu futhi uzimisele ukwenza baba okuningi ku incazelo umsebenzi.
Futhi, izimfanelo ubuholi njengoba saziso zihlanganisa ikhono ukuzizwa izinselelo imvelo bangaphandle kanye nesifiso aphendule nalezi zinselele. Lokho, abantu baqonde ukuthi ukufeza umgomo akulula, kodwa akazange ayeke, kodwa kunalokho whet. Ngakho-ke, umholi kumele kube sezingeni eliphezulu ukuzethemba.
Kubalulekile kakhulu umholi bezikhali ikhono lokucabanga futhi ukugxeka ngokwakhayo. Ngakho-ke, uma isisebenzi ugxeke ukuhamba komsebenzi kudingekile ukuba bambuze ukuthi ukwenza iziphakamiso ze ngcono. Uma unga ngokucacile futhi ngokugqamile samanje isixazululo ngokunengqondo, kungenzeka umholi wesikhathi esizayo - uma hhayi kicker njalo.
izimfanelo Ubuholi edingekayo ukufaka usizo njengoba zezwe. Abantu imibono bhá ngokuvamile hhayi kungaba abaholi. Badinga umuntu lapho, futhi uthi: ". It izosebenza, kuba - akukho" Futhi ehola kuleli cala kumele kube i-generator imibono, futhi (ezakhayo) umhlaziyi. Ngakho ukuthi umholi ethatha earthiness, nakuba kufanele kube uthando, njengoba siye eshiwo ngenhla kakade.
Yebo, umthwalo wemfanelo owengeziwe. Abaningi bangathanda ukuba nomholi iholo, kodwa hhayi wonke umuntu ufuna ukhathazeke nje umholi. Ngokuvamile boss awukwazi ukuthola kude umsebenzi bese uyakhohlwa, kuba - akubona umdwebi, ngubani efakwa ebhokisini, sibekwa ukuthi angashiya empini ngokuphepha.
Factor esiteji. Lokho kuyinto umholi ezingaba akukuniki yena nabanye ukumisa umsebenzi, hhayi ukwenza umsebenzi. Umuntu onjalo angeke igxile lobuphocelelako ukuqedela lo msebenzi, kumnyama kubomvu. Uma umsebenzi ubona izimfanelo wesikhulu esengamele - umholi omuhle kakhulu.
Kudingeka sikhuthazele ngaphezulu nangokomzwelo. Abaholi zihlale wedwa phakathi abasebenzi. Abakwazi ukunciphisa ibanga bathembane. Labo abeqa lo mthetho, ngokushesha ulahlekelwe ehamba phambili isikhundla salo. Ngakho-ke, ngokufaka isicelo indima umholi kumele athenge snobbery ezithile (ngabonakali) futhi ukujwayela yokuthi abangaphansi engasoze ibe umngane omthanda ngempela, ngakho musa ngisho nethemba lokuthi izinto zizoba ezinjalo.
Okungenhla - kuphela omunye imiqondo, imfundiso yokuziphendukela ubuholi izimfanelo. Zikhona nezinye, ezifana imfundiso yokuziphendukela umuntu omkhulu, othi umholi iza, uma kuziwa isidingo. Eyeza nezazi zezinkanyezi ezikhuluma kukhona okungenani eziyisithupha, kodwa ebekwe ukuba iningi kahle wabonisana.
Luhlolo Forensic kwemibhalo. Izinhlobo yokuhlolwa forensic
Ubunjalo Russian. ihlathi Russian. Incazelo bemvelo Russian